Hémorrhoids amin'ny vehivavy bevohoka
Ny hemorrhoid no sehatra mahazatra tena izy, izay mahakasika hatramin'ny 50% amin'ny mponina. Matetika ny atidoha dia manomboka amin'ny vehivavy bevohoka, rehefa misy fiovana ara-batana ny vatana. Ity aretina ity dia miteraka zava-manahirana lehibe ho an'ny tompony, ary noho ny hafanam-pon'ity olana ity dia mety halefa mandritra ny fotoana maharitra ny fitsidihana amin'ny dokotera iray.
Hémorrhoids amin'ny fitondrana vohoka - antony
Ny fiterahana sy ny hemorrhoid mandritra ny fitondrana vohoka - tranga iray mahazatra, ary misy ifandraisany amin'ny fihenan'ny cava ambany vena amin'ny tranonjaza bevohoka ary mitombo ny tsindry amin'izany. Ny plexus cavernous ao amin'ny rctum dia mpiara-miombon'antoka ao anaty cava ambany sy tsy mahazatra. Miaraka amin'ny fitomboan'ny tsindry ao anaty cava vena ambany noho ny fandikana ny ravin'ny vinaingitra avy amin'ny tendrony ambany dia manokatra sy mameno ny ra ireo sambo ireo. Ny atidoha eo amin'ny dingana voalohany amin'ny fitondrana vohoka dia tsy mbola nisy na oviana na oviana, satria mbola kely ny habetsaky ny uterus ary tsy afaka misintona ny cave ambany vena. Ny fisehoana na ny fihanaky ny hemorrhoid mandritra ny fitondrana vohoka dia matetika no hita ao amin'ny trimès fahatelo amin'ny maha-bevohoka azy, rehefa misy ny fifindrana hita avy amin'ny taova anatiny amin'ny fivontosana haingana be loatra.
Symptoms of hemorrhoids during pregnancy -
Ny sarin'ny hemorrhoids dia miankina amin'ny toerana misy azy: ivelany sy anatiny izany. Ny héméroïtre externe mandritra ny fitondrana vohoka dia mety hizaha amin'ny fomba samihafa, satria miparitaka any ivelany ny fototry ny hemorrhoidal. Miharihary izany amin'ny fahasitranana sy ny fandoroana ao amin'ny ratra, izay mihamangatsiaka amin'ny fihinana sakafo matsiro.
Ny hemorrhoids mandritra ny fitondrana vohoka dia tsy hita mandritra ny fandinihana, ary miseho amin'ny fahatsapana hafanana sy ny fitsikerana ao amin'ny rctum, ny fanaintainana matetika dia manome ny sacrum sy coccyx. Amin'ny karazana hemorrhoids rehetra, ny vehivavy dia afaka mahatsapa ny fihenan'ny tsinay, fahatsapana mampihetsi-po mandritra ny fipoahana ary ny fahatsapana ny tsy handoto tanteraka ny tsinay.
Hémorrhoids amin'ny fitondrana vohoka - inona no tokony hatao?
Rehefa azonao ny soritr'aretin'ny hemorrhoid dia azonao atao ny manandrana manasitrana ny tenanao. Ny antoka voalohany amin'ny fitsaboana mahomby dia ny fanarahana ny fihinanana sakafo sy ny fihetsiketsehana tsinay. Ho an'ny fifehezana ny fihenan-koditra, ampiasaina ireo laxatives izay mifototra amin'ny cellulose (Dufalac, Normaise, Lactovit), manampy azy ireo ny tsiranoka tsiranoka ary azo antoka ho an'ny ankizy. Afaka mampiasa biriky miloko miaraka amin'ny permanganate potassium ianao. Raha toa ka tsy ampy ireo fomba fitsaboana ireo dia azonao atao ny mampiasa ny menaka manokana (Proctosan, Vishnevsky manitra) ary labozia (Relief, Olfen). Raha toa tsy misy vokany, dia manontania dokotera.
Ahoana no fialana amin'ny hemorrhoids mandritra ny fitondrana vohoka?
Ny fisorohana ny hemorrhoids mandritra ny fitondrana vohoka dia ahitana:
Ny tombony ho an'ny vatan'ny olona (tsy mihoatra ny 1 kg isam-bolana);
fandavana ny sakafo matsiro sy sira;
faneriterena ny fampiasana ara-batana (indrindra fa ny fampiasana vatomamy);
fanamorana ny trano fandroana (sakafo, ary raha ilaina, maka aina);
esory ny hypothermie;
ny fampiharana ireo fampiharana manokana natao hisorohana ny fanombohan'ny hemorrhoids.
Inona no mampidi-doza ho an'ny hemorrhoids amin'ny fitondrana vohoka?
Ny hemorrhoid dia manana Ny vehivavy bevohoka dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny fiterahana sy ny famolavolana ny zaza atsy aoriana. Ity olana ity dia mampidi-doza noho ny fandosirana azo avy amin'ny fihenan'ny hemoglobinina sy ny erythrocyte. Raha miteraka hemorrhoid mandritra ny fitondrana vohoka, dia izao no anton'ny fifandraisana amin'ny dokotera.
Ny olana amin'ny hemorrhoid dia tena malemy, ary olona maro no mangina momba izany, matahotra na mahamenatra ny mahita dokotera. Tena diso izany, satria ny rctum dia mitovy ny an'ny hafa, ary tsy misy mahamenatra izany. Ny fotoana iray tsy hita dia mety hitarika amin'ny fivoaran'ny fahasarotana izay miteraka loza, indrindra mandritra ny fitondrana vohoka.
Ny labozia Buscopan nandritra ny fitondrana vohoka talohan'ny fiterahana
Ny herisetra 12 herinandro - Famerenana ultrasound
15 herinandro ho an'ny bevohoka
Fiantohana vehivavy bevohoka
Fanafody fampangatsiahana nandritra ny fitondrana vohoka
Tombombombombao marefo mandritra ny fitondrana vohoka
Inona no dikan'ny fankalazana amin'ny Andron'ny Tompo?
Mpihinana marinated: tsara sy ratsy
Ahoana ny fananganana takelaka keky?
Ahoana ny fametrahana famantaranandro hentitra ho an'ny ankizy?
Sakafo ho an'ny kibab shish
Fitsaboana ao amin'ny oven miaraka amin'ny fofona
Ny dite jasmine - tsara sy ratsy
Chloe Moretz sy Brooklyn Beckham dia nizara ny takariva mahafinaritra tao Instagram
Daty - ireo toetra mahasoa sy ny fanoherana
Ny sarin'ny Mpaminany: ireo mpaminany malaza dia nanambara ny tsiambaratelon'ny Mesia
Gavin Rossdale dia manana olana amin'ny modely Alemana izay tanora kokoa noho izy nandritra ny 24 taona